ဝင်ရောက်ပြီးဖတ်ပေးကြပါ အကူအညီ လိုချင်လိုပါ - MYSTERY ZILLION
ဝင်ရောက်ပြီးဖတ်ပေးကြပါ အကူအညီ လိုချင်လိုပါ
ကျွန်တော်စက် က သုံးနေရင် နဲ့ restart ကျကျ သွားတယ် ပြီးတော့ ပြန်တက်လာတယ် အကြံဉာဏ်လေး ဘာလေး ဝိုင်းပေးကြပါ
Reinstall the window (OR) check ur RAM is enough or not..
if not enough buyanew RAM...
RAM is 4GB that is enough i think so.
1.check your cpu temperature in bios setting...
2.check your cpu usage in task manager
(If any virus in your computer, they use alot of cpu...
it may hangup or restart to your computer sometime)
Sometimes if CPU fan is not working, the computer will often restart because of heating.
Yeah maybe,That is cause motherboard or not. Thank U for your advice.
Check inside of your pc for dust. If the dust is there, you need to clean. And check the glue of cpu because sometimes glue of cpu is dried and gone.So,your cpu(processor) will not work properly.
And you need to do bios clear. If the above process is not work , I think it is power supply error.
(၁) Memory ကဒ်ကြောင်နေရင်လည်းဖြစ်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်လွတ်နေတာ။
(၂) Power Supply က Power လုံလုံလောက်လောက်မထုတ်ပေးနိုင်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တာပဲ။
(၃) ဒါမှမဟုတ်Power Supply နဲ့ Main board join တဲ့ကြိုးပျက်နေတာ
(၄) Computer အသုံးများရင်လည်း Overheat ဖြစ်ပြီး restart ကျနိုင်တယ်။
(၅) သွင်းထားတဲ့ software နဲ့ game တွေမှာ windows နဲ့ Compact မဖြစ်တာရှိနေတာ၊ ဒါမှမဟုတ်
အများကြီးသွင်းထားတဲ့အတွက် OS မှာ process တွေများနေတာ၊
(၆) Hard Disk ချို့ယွင်းနေရင်လည်းဖြစ်တက်ပါတယ်။
(၇) Casing ထဲမှာဖုန်တွေအရမ်းများနေရင်လည်းဖြစ်တက်တယ်။
(၈) ဒါကတော့နောက်ဆုံးတရားခံ Virus ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
__" alt="" />